विश्वकप फुटबलको ड्र आज मस्कोमा हुदै, यसरी हुन्छ ड्र
काठमाडौँ । आगामी वर्ष रसियामा हुने फिफा विश्वकप फुटबलको ड्र आज (शुक्रबार) साँझ मस्कोमा सार्वजनिक हुँदैछ ।
नेपाली समय अनुसार आज साँझ ८ बजे सन् २०१८ को जुन १४ देखि जुलाई १८ सम्म हुने २१औँ विश्वकपको ड्र सार्वजनिक हुँदैछ ।
विश्वकप फुटबलमा सहभागी ३२ टिमको टुंगो लागेको छ । यस विश्वकपमा युरोपबाट आयोजक रसियासहित बेल्जियम, जर्मनी, इङल्याण्ड, स्पेन, पोल्याण्ड, आइसल्याण्ड, सर्विया, पोर्चुगल, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, क्रोएसिया, स्वीडेन र डेनमार्क छनौट भएका छन् ।
त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, उरुग्वे, अर्जेन्टिना, कोलोम्विया र पेरु छनौट भएका छन् । एशियाबाट इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलिया छानिएका छन् । त्यस्तै उत्तर अमेरिकाबाट मेक्सिको, कोस्टारिका र पनामा विश्वकपमा छनौट भएका छन् ।
अफ्रीकाबाट नाइजेरिया, इजिप्ट, सेनेगल, मोरोक्को र ट्युनिसिया छनौट भएका छन् ।
कसरी हुन्छ विश्वकपको ड्र ?
फिफाका अनुसार ड्रमा ३२ टिमलाई ८ समुहमा विभाजन गरिने छ ।
फिफाको हालको वरियता अनुसार शिर्ष वरियताका ७ टिम र आयोजक रसियालाई एउटा पटमा राखिने छ । त्यसपछिका वरियताका ८ टिमलाई अर्को पटमा राखिने छ । यसै गरी ३२ टिमलाई ४ पटमा विभाजन गरिने छ । यसरी हरेक समुहमा चार टिम छानिने छ । रसिया आयोजक भएको हिसाबले समुह ए मा रहने फिफाले जनाएको छ । त्यस्तै हालको वरियता अनुसार आयोजक रसियासहित जर्मनी, ब्राजिल, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, पोल्याण्ड र फ्रान्सलाई एक पटमा राखिने भएको छ । यसबाट शिर्ष वरियताका यी टिमहरु एउटा समुहमा नपर्ने निश्चित भएको छ ।
हरेक समुहका टिमहरु एक अर्कासँग खेले पछि शिर्ष दुई टिम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने फिफाले जनाएको छ ।
कहिले हुदै छ विश्वकप फुटबल ?
रसियामा हुने फिफा विश्वकप आगामी जुन १४ विहिबार देखि सुरु हुने छ । आयोजक रसियाले पहिलो खेल खेल्ने छ । विश्वकपको फाइनल खेल जुलाई १५ आइतबार मस्कोमा हुने छ ।